आज पुरुषहरु फैशन सामान पाउन सकिन्छ आफ्नो हातमा चुरा। यो उत्पादन मात्र होइन युवा, तर पनि वयस्क आदरणीय मानिसहरू उपयुक्त छ। को सही अनुरूप कंगन आकस्मिक पहनने र औपचारिक कपडे। आभूषण, काम गर्न लगाउँथे गर्न सकिन्छ एक पैदल मा क्याफे र यति मा। नाम कंगन कलाई "कंगन" को लागि फ्रान्सेली छ।
पहिलो पुरुष कंगन प्राचीन मिश्रको योद्धाहरू पहने थिए। यी गहने सैन्य वीरता, अख्तियार र शक्ति को एक प्रतीक मानिन्छ थिए, र लड समयमा रक्षा गर्ने थियो जो जन्तरको, रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले मात्र को कलाई मा कंगन लगाएका, तर पनि गोलीगाँठो, forearms मा। समय, विनिर्माण को प्रविधि र शैली नाटकीय परिवर्तन भएको छ। काठ र पशु हड्डी बनेको पहिलो कंगन, त्यसपछि तिनीहरूले धातु बनेको थियो। र मध्य युग मा, हात मा एशिया केटाकेटीलाई सुरक्षाको लागि एक amulet रूपमा सुन गरगहना लगाउँथे।
पुरुषहरु कंगन सधैं धेरै लोकप्रिय भएको, तर यस्ता आभूषण लागि फैशन, सबैभन्दा को 19 औं शताब्दीमा व्यापक छ। यस समयमा, मास्टर ज्वैलर्स कौशलतासाथ बहुमूल्य धातु बाट आभूषण बनाउन सिकेका छन्।
हाल लोकप्रियता को शिखर मा फेरि कंगन। टाइटेनियम, टंगस्टन, उच्च-बल इस्पात, रबर र छाला: तिनीहरूले विभिन्न सामाग्री बनेको छन्। सबै समय सान्दर्भिक चाँदी, सुन कंगन, प्लेटिनम र रत्नहरू देखि विशेष विकल्प।
त्यहाँ पुरुष कंगन को नरम र कडा संस्करणहरु छन्। द्वारा कठोर लेख पूर्ण रिङ को कब्जा मा संलग्न छन् - को टिका र ताले मंडल को दुई पक्ष जोडिएको र springy रूपमा भताभुङ्ग उपस्थिति राउण्ड भएको। नरम मोडेल छाला वा पातलो तार धेरै एकाइहरु glidernye को निर्वाचकगण को श्रृंखला लट कंगन समावेश गर्नुहोस्।
अधिक ठोस एक सजावट हुन सक्छ - अधिक विशाल: नयाँ सिजन मा, पुरुषहरु भारी छैन कंगन लगाउन, आफ्नो आकार को गठन र हात मोटाइ थप निर्भर हुनत सल्लाह छन्। मानिसहरू लागि पूर्ण डाली मोडेल र चेन कंगन रूपमा सान्दर्भिक।
लुगा संग अनुकूलता के चिंता, छाला कंगन जीन्स, जूता र टी-शर्ट लागि पूर्ण छन्। धातु एक स्वेटर V-घाँटी संग प्यान्ट अन्तर्गत लगाउन सबै भन्दा राम्रो छ। रबर सजावट आकस्मिक लुगा संग पूर्ण जानेछ।
आफ्नो पाहुना मा पुरुषहरु कंगन धेरै बताउन सक्छ। उदाहरणका लागि, सख्त र ठीक चाँदी र सुन गरगहना लागि, सामान्यतया मानिसहरू व्यापार शैली मा निहित। छाला कंगन, कपडा, गैर-रत्नहरू, नम्र, हावाको वर्ण किशोरों र युवा वयस्क मा निहित संग मान्छे आफ्नो मालिक चिनारी। आकर्षक र pretentious, ठूलो र उज्यालो, सुन बनेको, बहुमूल्य पत्थर संग Inlaid सामान्यतया तारा र socialites छन्।
एक jewel, अन्य मा - - प्रभावशाली छ र दिन लायक देखिन्छ जो नै समय, मा मालिकको शैली र सजावट जोड एउटा सहायक एक पक्ष पुरुषहरु कंगन मा सजावट रूपमा।
हालैका वर्षहरूमा मानिसहरू लागि आभूषण दुवै चासो बढेको र कंगन, औषधीय उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ। नवीनता स्वास्थ्य उत्पादन, जो पनि धेरै फैशन हुन सक्छ।
कंगन निम्न कोटिको उपचार लागि आउन: चुम्बकीय आवेषण, स्टेनलेस स्टील संग उपचारात्मक र निवारक गुण संग zirconia (सबै भन्दा प्रसिद्ध), सामान्य सस्तो चिकित्सा कंगन, आभूषण र तामा, चाँदी-जलप सुन-जलप, अर्ध-रत्नहरू समावेश।
यसरी, पुरुषहरु कंगन अन्य आभूषण अधिक लाभ छ गहने मानिसहरू लागि, मात्र किनभने यसको प्राचीन जरा को, निको शक्ति, तर पनि नम्रता, सौन्दर्य र शानदार दृष्टि।
संग फेसनदार कंगन पुरुष चरित्र साहस, आत्मविश्वास र अठोट को मालिक दिन एक अद्भुत उपहार हुनेछ।
आफ्नो पीठ मा महिला को लागि टैटू - बोल्ड बालिका को विकल्प
जहाँ यी जैकेट किन्न "नाइके"?
को स्टोर मास्को मा "Rezerved" ठेगाना। ब्रान्ड लाभ
एक झोला छनौट कृत्रिम छाला बनेको
तपाईंको हातले एयर कंडीशनर स्थापना गर्दै
रूस को जनसंख्या को लिङ्ग र उमेर संरचना
Motoblock "क्यासकेड": कार्बोरेटर समायोजन। उपकरण र विनिर्देशों motoblock "क्यासकेड"
रातो-पहेंलो-हरियो झण्डा। रातो, हरियो, पहेंलो, कसको झण्डा?
कसरी किंडरगार्टन को पहिलो साना समूहमा एकीकृत कक्षाहरू सञ्चालन गर्न?
हंस Albert Einstein - पहिलो छोरा अलबर्टा Eynshteyna र Mileva Maric: जीवनी
के भने कोठा रंग मा नस्ल gnats
टिभी श्रृंखला "एक पंख को चरा भनेर।" फिल्म को अभिनेता "एक प्वाँख को"
Marika नाम: मान, व्याख्या, मूल र विशेषताहरु
रोग र घाइते मा एक्स-रेज हात